Isboortigu ma aha wax ku kooban magaalo keliya, dalka Soomaaliyeed magaala kasta oo ay ku suganyihiin dhalinyaro waxaa ka socda firfircooni Isboorti, waxaana loo baahanyahay in deegaan kasta uu u qorsheeyo dhalaanka barnaamijyo Isboorti oo ku xiran dugsiyada quraanka, ama waxbarasho, degaamadda xaafadaha si loogu jiheeyo anshax wanaaaga. Uma baahnin in lagu daydo shisheeye, balse dadka Soomaaliyeed waxaa dhaqan u ahayd naxariis, wadaag iyo wada tashi. Himmilladu waxay ahaan lahayd in la ururiyo Agoonta faraha badan la baro aqoon lagu ababiyo Isboortiga loona yeelo yool ama rajo ay hiigsadaan. Dad badan ayaa soo gacan qabtay dhalaan aad u fara badan heer shakhsi, waase yaryihiin ururo samafal Soomaali maamusho oo maal geliso.
Haddii qaran dumo oo dhibi timaado waa in loo adeegsadaa dariiqad kasta sida dib loogu dhiso lahaa, in la lahaado ujeedo dhow iyo mid dheer. Noloshu ma aha inaad iska noolaatid ee waa tayada nolosha. Nolosha Aduunka waa mid aad u kooban sidaas awgeed waa iney waafaqdaa diinta. Bahwaynta Isboortiga oo ah maanta kuwa kaliyah ee ka badbaaday kala qob qobka qabyaalada dilootay waxgaradkeenii, ayaa iyana waxaa ku haboonaan lahayd in ay qorshahooda ku darsadaan, dadaalka badbaadinta danyarta. Qofkastaa haduu qaybtiisa ka qaato hawsha ummadda waxaa lagu gaarayaa muhimadda si fudud. Isboortigu wuxuu ka mid yahay adeega bulsho. Waana in baahida bulshadda loo qabtaa sidey u kala muhimsan tahay.